Vavam-bavaka manafaka ny fanahin'ny fijangajangana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Fanafahana fanafahana manohitra ny fanahin'ny fijangajangana
Fanafahana fanafahana manohitra ny fanahin'ny fijangajangana
Ny Baiboly dia nanambara mazava momba antsika fa tokony handositra amin'ny filan'ny nofo isika. 1 Korintiana 6:18. Fanahin'ny faniriana ny fanahin'ny fananganana dia nanjary fiarovana mafy amin'ny fiainan'ny tanora maro, anisan'izany ny Kristiana. Maro amin'ireo mpino no mbola miady amin'ny fahotan'ny fijangajangana ao amin'ny fiainana. Raha miady amin'ny fahotana ara-pananahana amin'ny fiainanao ianao dia hanampy anao hanafaka ny tenanao ireo vavaka amin'ny fanafahana manohitra ny fanahin'ny fijangajangana. Alohan'ny handehanantsika amin'ireto vavaka famonjena ireto dia andao hahatakatra ireo teny sasany.
Inona no atao hoe famolavolana? Firaisana ara-nofo firaisana ara-nofo eo amin'ny olon-droa tsy manambady. Fahotana eo imason'ny Tompo io. Ny fahotan'ny fijangajangana dia ny fanehoana lisitry ny firaisana amin'ny olona iray. Fahotana mahatsiravina tokoa izany, amin'ny heviny raha manokatra ny varavarana amin'ny karazan'aretin'ny demonia rehetra sy ny fanodikodin'i satana ao amin'ny vatana. Nilaza i Paoly fa ny ota amin'ny fijangajangana dia tsy mitovy amin'ny ota hafa satria misy fiantraikany amin'ny vatana. Rehefa matory miaraka amin'ny olona iray ianao, dia lasa lasa iray amin'iny olona iny, raha ny demony dia lasa demonia. (Jereo ny 1Korintiana 6:18).
Ahoana no fomba hamonjeko ny tenako amin'ny fijangajangana?
1). Miteraha-jaza indray: Ny famonjena no dingana voalohany. Tsy maintsy mino ianao fa Jesosy Kristy no Tomponao sy mpamonjy ary nalainy ny fahotanao, ny taloha, ankehitriny ary ny ho avy, ka nofantsihany teo amin'ny hazo fijaliana. Tokony hino ianao fa tsy tezitra aminao Andriamanitra, noho ny fahotanao taloha ary mbola tia anao izy na dia tsy mahomby aza ianao anio. Ny famonjena dia manala antsika amin'ny fitiavan'i Kristy tsy misy fepetra izay manafaka antsika amin'ny ota sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny ota.
2). Mivavaha mba hivoahana. Tokony hivavaka ianao mba hialana amin'ny fakam-panahy. Aza mandray dingana tsy mila manatona an'Andriamanitra. Tsy maintsy manohy manafaka ny tenanao amin'ny fitazonana ny fanahin'ny fijangajangana rehetra ianao amin'ny fiainanao. Tsy maintsy miaiky ny fahamendrehanao ao amin'i Kristy ianao mba ho afaka. Ity vavaka fanafahana manohitra ny fanahin'ny fijangajangana ity dia hanampy anao amin'ny fiainanao mivavaka. Tsarovy fa ny zanak'olombelona efa nanafaka dia afaka tokoa.
1. Ray ô, misaotra anao aho noho ny herinao lehibe hanafaka ahy amin'ny fanandevozana rehetra amin'ny heloka ara-nofo.
4. Manafaka ny tenako amin'ny fifandraisana rehetra amin'ny lehilahy ara-panahy sy vady fanahy aho izay mitarika ahy amin'ny fahotana ara-nofo amin'ny nofy, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Manafaka ny tenako amin'ny karazana firaisana ara-nofo rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Mandidy ny demonia rehetra amin'ny famoronana ara-pananahana aho amin'ny fiainako hivoaka miaraka amin'ny fakany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny fanahy rehetra amin'ny fijangajangana voatendry amin'ny fiainako dia hofatorana, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ry Raiko Tompo ô, avelao haringana amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny ota rehetra manandevo ao amin'ny firaisana ara-nofo
10.Ny Fanahin'ny fijangajangana sy ny filan'ny andiany izay mihodina manodidina ny fiainako, mandray ny zana-tsipiky ny afo ary mijanona ho voafatotra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
11Dia mandidy ny hery rehetra amin'ny fijangajangana amiko aho mba hitanao izao !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ry Tompo, avelao ny fiarovana mafy demonia tsirairay namboarina teo amin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny fanahin'ny fijangajangana, amin'ny anaran'i Jesosy.
13.Azoana ho potipotika amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fijangajangana rehetra izay nandany ny fiainako.
14.Aoka ny fanahiko ho afaka amin'ny herin'ny fanahin'ny fijangajangana, amin'ny anaran'i Jesosy.
15.Izao ny Tompo Andriamanitr'i Elia, hitsangana amin'ny tànana mahery amin'ny vady / mpivady fanahy ary amin'ny hery rehetra amin'ny filan'ny nofo.
16.Manaparitaka ny herin'ny hery mametaveta amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
17Taviko ny vokatry ny fahotan'ny fijangajangana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
18.Izao ny olon-tsy fantatra ratsy rehetra sy ny setan'i satana rehetra tamin'ny fiainako, vokatry ny fijangajangana dia nesorina ny ran'i Jesosy. amin'ny anaran'i Jesosy.
19.Ny afo Ghost, diovy tanteraka ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
20.Izaho dia manafaka tanteraka amin'ny fanahin'ny fijangajangana sy ny fahalotoam-pitondrantena amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Izaho dia manapa-kevitra ny hanafaka ny masoko amin'ny filan'ny nofo, amin'ny anaran'i Jesosy.
22.Izay androany, avelao ny masoko hitantana ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
23 Ry Fanahy Masina ô, mianjerà amin'ny masoko, ary dory ho lavenona ny hery ratsy rehetra sy ny hery satanika mifehy ny masoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
24Hanambara aho fa afaka tanteraka tamin'ny fanahin'ny fijangajangana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
25. Mifohaza noho ny valin'ny vavak'Andriamanitra.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro 29 Oktobra 2018.
Next lahatsoratra50 Mivavaka momba ireo mpamono olona
Allison Brown 28 septambra 2019 amin'ny 9:20 maraina
Misaotra anao amin'ireto vavaka ireto. Andriamanitra dia nitarika ahy tamin'ireto vavaka ireto ho famonjena ahy farany. Tena nilaiko izy ireo.
Godwin Okon 5 Janoary 2021 Tamin'ny 9:33 maraina
Faly be aho mandray ity vavaka mahery androany ity.
Navoaka tamin'ny anaran'i Jesosy Amena aho
Fantatro hatramin'ny androany fa tsy hitovy ny fiainako.
Misaotra mandrakizay Pasitera.
Voninahitra rehetra ho an'i Jehovah Andriamanitra Tsitoha
Gabriel5537 20 Janoary 2021 Tamin'ny 4:44 maraina
Laud Addae 29 Janoary 2021 Amin'ny 4:06 hariva
Andriamanitra anie hitahy anao pastera ..
Mizara izany amin'ny fiangonako aho
Anonima 29 martsa 2021 Amin'ny 5:55 hariva
Gracias, espero y Andriamanitra no afaka
senyo k. ansah 6 aogositra 2021 Amin'ny 6:13 hariva
tiako ity pejy ity Andriamanitra dia hitahy anao be dia be, ry lehilahin'Andriamanitra ô, mivavaha ho ahy fa manana an'ity olan'ny filan-dratsy ity aho…. misaotra
Zava-bavaka 30 ho an'ny fampahafantarana voankazo ara-panahy
20 Ireo vavaky ny vavaka hahazoana fanafahana amin'ny fanitsakitsaham-bady
Teboka vavaka hanoherana ny sakafo ratsy